> Household wear>MAX-062 Corner high glass cabinet
Height open glass door corner cupboard with5adjustable shelves. နံရံထောင့်များတွင်ထားသည့် ဖွင့်မှန်တံခါး ဗီရိုမြင့်ဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောစင် (၅)ခုပါဝင်သည်။ Size: W89*D42.5*H200 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၉၊ အနံ ၄၂.၅၊ အမြင့် ၂၀၀ စင်တီမီတာ
Height open glass door corner cupboard with5adjustable shelves. နံရံထောင့်များတွင်ထားသည့် ဖွင့်မှန်တံခါး ဗီရိုမြင့်ဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောစင် (၅)ခုပါဝင်သည်။ Size: W89*D42.5*H200 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၉၊ အနံ ၄၂.၅၊ အမြင့် ၂၀၀ စင်တီမီတာ loading capability up to 50 kgs. per each shelf စင်တစ်စင်လျှင် ၅၀ ကီလိုထက်မနည်းတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။